Dagaalo hubka noocyadiisa kale duwan leysu adeegsaday oo xalay ka dhacay qeybo ka mid ah magaalada Muqdisho.
January 24, 2012 | Posted by admin
DUHUR--Dagaalo u dhaxeeyay Ciidamo ka tirsan Dowlada Federaalka Soomaalia oo kaabayay Ciidamada Midowga Africa oo isku dhinac ah iyo ciidamo ka tirsan Shabaabb ayaa xalay ku dhexmay qeybo ka mid ah xaafadaha suuqa xoolaha ee magaalada Muqdisho.
Wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in dagaalo leysu adeegsaday hubka noocyadiisa kale duwan oo u dhaxeeyay ciidamo ka tirsan dowlada Soomaalia oo kaabayay Ciidamada Midowga Africa iyo Ciidamo ka tirsan Shabaab ayaa xalay ka dhacay qeybo ka mid ah xaafadaha Suuqa Xoolaha ee magaalada Muqdisho.
Dagaalka ayaa sida la sheegay ka dambeeyay ka dib markii ciidamada dowlada iyo kuwa Amison ay weerar ku qaadeen Fariisin ay ciidamada Shabaab ku leeyihiin qeybo ka mid ah xaafadaha suuqa xoolaha taasi oo ka dib markii uu dhacay halkaasi uu ka bilowday dagaalo socday mudo saacado ah oo labada dhinac dhexmaray.
Lama oga ilaa iyo haatan qasaaraha dhabta ah ee ka dhashay dagaalka xalay ka dhacay qeybo ka mid ah degmooyinka dhinaca waqooyi galbeed ee gobalka Bannaadir.
Hase ahaatee maahan markii ugu horeysay ee sidaan oo kale qeybo ka mid ah magaalada Muqdisho ay dagaalo ku dhex maraan ciidamada Dowlada iyo ciidamada Amison oo isku dhinac ah iyo ciidamada Shabaab oo iyagu ka sii dhamaanaya guud ahaan caasimada Soomaalia ee Muqdishu
« Daawo Dooda Culumada: Maqnaanta Cadaalada Iyo Ahmiyada Ay U Leedahay Islaamka
Qarax Baabuur Loo Adeegsaday oo Xalay Ka Dhacay Beledweyne »
Marquez hangs up his boots